Quick Start - Lead / Contact Management -
Get Started - Videos
Asa sy fanaraha-maso
Tatitra & Dashboards
UTrons - Manomboha
Hiditra Signup Now
Jereo ny resaka sy fampahalalana rehetra ao amin'ny toerana 1
Ny fametrahana dia mitondra mankany amin'ny mpivarotra ary mifehy ny fahitana ny firaketana
Hanamboatra Columns & Save Filters
Jereo ny resaka sy fampahalalana rehetra ao amin'ny toerana 1 1 ny 2
Tsindrio ny anaran'ny kaonty hahitanao ny antsipiriany rehetra, naoty, asa, resadresaka, mailaka, rakitra mifandraika ets. Ao amin'ny toerana 1.
Azonao jerena eto ny asa atao teo aloha. Afaka manampy koa ianao Fanamarihana / resaka / asa na mandefa rakitra mifandraika.
Azonao atao koa ny mahita ny fampahalalana amin'ny fifandraisana sy ny rakitsoratra mifandraika - amin'ny toerana rehetra.
Azonao atao ny mamorona ny mailaka ka ny resadresaka rehetra mifandraika amin'ny CompanyHub dia hampifandray amin'ny CompanyHub CRM. Na dia mandefa / mandray mailaka ivelan'ny CompanyHub aza ianao.
Fantaro bebe kokoa: Ahoana no fomba fampandrenesana mailaka
Ny fametrahana dia mitondra mankany amin'ny mpivarotra ary mifehy ny fahitana ny firaketana 1 ny 3
Mitarika amin'ny mpivarotra ny fametrahana: Ny rakitsoratry ny rakitsary dia manana saha 'Assigned To' izay manondro ny mpivarotra izay mifandray (na ny rakitsoratra hafa). Matetika izy io no asaina amin'ny mpampiasa izay mamorona / manipika ilay rakitsoratra.
Raha toa ka tsy hita amin'ny endrika ny saha ary te hampiseho azy ianao dia afaka manova izany ary manisika azy hivoaka amin'ny sehatra Hidden amin'ny farany ambany amin'ny sehatra hafa.
Ny fametrahana dia mitondra mankany amin'ny mpivarotra ary mifehy ny fahitana ny firaketana 2 ny 3
Raha hita ho an'ny besinimaro ny fahitana ny kaonty / orinasa / orinasa (olom-panjakana), dia hita amin'ny rehetra ny rakitra rehetra. Azonao atao ny manova ny sehatra mankany amin'ny ambaratonga fototra. Amin'io tranga io, ny rakitsary dia ho hitan'ny mpivarotra, ny mpitantana azy, ny mpitantana ny mpitantana ary ny sisa.
Mianara bebe kokoa: Control Control Data
Ny fametrahana dia mitondra mankany amin'ny mpivarotra ary mifehy ny fahitana ny firaketana 3 ny 3
Ny ambaratongam-pahefana dia fanapahan-kevitry ny sehatr'ireo profil. Izy io dia mametraka ny 'Reports to' sehatry ny Profile. Araka ny tatitra, ny mpampiasa dia mitatitra amin'ny tale mpanatanteraka sy ny tale mpitantana any amin'ny CEO.
Raha te hanana ny fitsipika momba ny fahitana anao ianao toy ny miorina amin'ny Product, Country, Industry etc., izay azo atao ihany koa. Ampio ny fanohanana ary hanampy izy ireo.
Ny mpivarotra dia mankahala CRM satria mandany fotoana izy ireo. Noho izany dia nataonay fa mora ho azy ireo ny manavao haingana ny CRM mba hahafahan'izy ireo mandany fotoana bebe kokoa hivarotana!
Mianara bebe kokoa: Manetona Quick Fields
Custom Fields 1 ny 2
Azonao atao ny manara-maso ny fampahalalana rehetra ilainao miaraka amin'ny saha mahazatra. Like Industry, Date renewal, Source, Fidiram-bola, Products etc.
Afaka mamorona karazana saha isan-karazany ianao Text, vola, Number, Date, Select safidy, Total, Formula, Mandraisa firaketana hafa etc.
Mianara bebe kokoa: Manamboatra saha
Custom Fields 2 ny 2
Ireo saha ireo dia efa misy any amin'ny toerana rehetra - Filtres, Forms, Reports, Fahazoan-dàlana momba izany. Azonao atao ihany koa ny mifehy izay afaka mahita / hanova ny saha amin'ny alàlan'ny fanarahana ny fahazoan-dàlan'ny profil.
Hanamboatra Columns & Save Filters 1 ny 2
Azonao atao ny manova mora foana ny tsanganana.
Mianara bebe kokoa: Filtres
Hanamboatra Columns & Save Filters 2 ny 2
Afaka manasivana mora foana ny rakitsoratra mifototra amin'ny sehatra toy ny mpivarotra, ny firenena, ny daty manaraka. Azonao atao koa ny mamonjy ireo sivana.
Alefaso aminay ny valiny vitsivitsy
Misaotra anao noho ny fanamarihana sarobidyo